Aniga Iyo Aabahay Waxaan Isku Fara-Saarnay Goob Dagaal Waxaana Ku Kala Jirnay Labo Ciidan Oo Iska Soo Horjeeda. – Xeernews24
Aniga Iyo Aabahay Waxaan Isku Fara-Saarnay Goob Dagaal Waxaana Ku Kala Jirnay Labo Ciidan Oo Iska Soo Horjeeda.
10. September 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Haweeney taliye boolis ah oo u dhalatay dalka Itoobiya ayaa BBC-da uga sheekeysay qisada ku saabsan sidii ay dabayaaqadii 1970-meeyadii iyadoo dhowr iyo toban jir ah ugu biirtay koox fallaago ah oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa xoreynta shacabka Tigray-ga(TPLF), ayna goob dagaal ku wajahday aabaheed.
Wuxuu gabadhan aabaheed markaas ka barbar dagaallamayay ciidamada dowladda Milatariga ahayd ee xilligaas ka arrimineysay dalka Itoobiya.
“Aabaheen, Kasa Hailu wuxuu dhinaca siyaasadda kula dagaallamay dhammaan shan carruur ah oo uu dhalay. Laakiin aniga iyo isaga waxaan isku farasaarna, dagaal khaas ah oo lagu magacaabo Adi Emiru, markii aan isfara-saarnay ka dibna ugu dambeyntii wuxuu dib ula gurtay ciidankiisii dhaawacmay”, sidaas waxaa BBC-da u sheegtay Alemtsehay Kasa.
Ms Alemtsehay hooyadeed waxay sidoo kale ahayd taageere daacad u ah Fallaagada TPLF, waxayna isku dayday inay ka dhaadhiciso ninkeeda, oo askari ahaa, inay ka badasho fikradda, sida ay gabadhooda sheegeyso.
Waxay seygeeda u qortay warqad ay uga baryeyso inuusan dagaal uga hortagin gabadha 14 jirka ah ee ay wada dhaleen – laakiin wuu ku gacan seyray codsigaas, isagoo ku dalbaday in haddii ay wanaag dooneyso ay gabadhooda kasoo celiso fallaagada ay duurka kula jirto.
Ms Alemtsehay markaas ka dib u dirtay warqad ay ku leedahay sidan:
Xukuumadda aad u dagaallameysid waxay leyneysaa qaraabadaada mana aha dimqraaddiyad. Xitaa haddii aad daacad u tahay iyaga, ma ahan aabe inuu gabadhiisa dagaal uga hor tago
Hase ahaatee, Mar kale ayuu diiday inuu kasoo goosto ciidamada dowladda, oo lagu yaqaannay inay gacan bir ah kula dhaqmi jirtay mucaaradka, iyadoo kumannaan q foo dowladda kasoo horjeedayna la dilay.
Markii dambe Mr Kasa waxaa lagu dhaawacay dagaal kale oo la magac baxay Feres My, waxaana maxbuus ahaan gacanta ugu dhigay xoogagga fallaagada, ugu dambeyntiisa wuxuu isagoo maxbuus wali u ah geeriyooday sanadkii 1982-kii.
Ms Almetshay waxay sheegtay in markii ay dagaal yahannada ay isku kooxda yihiin ka maqashay geerida aabeheed ay aad u murugootay.
“Iima suurtagalin inaan aabahay dib u arko – aad baan u walbahaaray markii aan warka maqlay. Balse intaasoo dhan waxaa iiga sii darneyd in aabahay uu dhintay isagoo wali taageersan maamul dilaa ah oo aad u xukun adag”, ayey tiri.
Muddo 17 sano ah ayey xoogagga fallaagada ku qaadatay inay xukunka ka tuuraan dowladdii milatariga ee Mengistu Haile Mariam, kaasoo dibadda u baxsaday sanadkii 1991-kii.
Labo kamid ah Ms Almetshay walaalaheed ayaa sidoo kale ku dhintay intii uu dagaalka socday.
Hadda oo ay tahay taliye ka tirsan booliska Itoobiya, ayna hooyo u tahay labo carruur ah, Ms Almetshay waxay sheegtay in ay wali ku faraxsan tahay doorkii ay ku lahayd afgambigii lagu sameeyay Mengistu, xitaa iyadoo arrintaas darteed ku weysay aabaheed iyo walaalaheed.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/09/aniga-iyo-aabahay.jpg 371 660 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-09-10 09:29:032019-09-10 09:29:03Aniga Iyo Aabahay Waxaan Isku Fara-Saarnay Goob Dagaal Waxaana Ku Kala Jirnay Labo Ciidan Oo Iska Soo Horjeeda.
Waa kuwee lixda hogaamiye ee ugu muhiimsan Taliban?
Taliyaha iyo Saraakiisha qeybta 21-aad oo la kulmay Taliska ciidamada Jabuuti... Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu caafimaad qabo sana...